अभिनेत्री काजल अग्रवालले आफ्नो विहेको अनाउन्समेन्ट गरिन्, को सँग गर्दै छिन् त
Homeसमाचारअभिनेत्री काजल अग्रवालले आफ्नो विहेको अनाउन्समेन्ट गरिन्, को सँग गर्दै छिन् त
October 6, 2020 admin समाचार 9481
साउथ फि’ल्मकी चर्चित एवं सुन्दर अ’भिनेत्री काजल अ’ग्रवालले आफ्नो विहेको अनाउन्स’मेन्ट गरेकी छन् । अभिनेत्री काजलले मंगलबार (आज) आफ्नो इ’न्स्टाग्राम अकाउन्ट’मार्फत् गौतम किचलुसँग ३० अक्टोवरमा विहे गर्दै गरेको जान’कारी गराएकी हुन् ।
कोरोना महा’मारीका कारण परिवार तथा आफन्त’हरुको उपस्थितिमा मुम्बईमा उनले विहे गर्न लागेकी हुन् । विहेपछि पनि आफूले आफ्नो दर्शक’हरुलाई मनोर’ञ्जन दिइरहने बताएकी छन् । उनले आफ्नो दर्शकहरुलाई पनि निरन्तर साथ र सह’योगका लागि धन्यबाद दिएकी छन् ।
अभिनेत्री का’जल साउथ फिल्म उद्योगकी सु’परस्टार हुन् । हिन्दी फिल्ममा पनि उनले आ’फ्नो अभिन’यले सबैको मन जितिसकेकी छन् । अभिनेत्री काजल पछिल्लो १६ वर्षदेखि फिल्म उद्यो’गमा सक्रिय छन् ।
उनले फिल्म ‘क्यों ‘हो गए ना’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी ल’गातार साउथ फिल्म’मा व्यस्त बनिन् । उनले अजय देवगनको फिल्म सिंघ’ममा पनि काम गरेकी थिइन्, जहाँ दर्शकहरुले उनको अभि’यनको खुब तारिफ गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनले स्पेशल २६, दो लोफ्जों की कहानी’लगायत बलिउड फि’ल्ममा काम गरिसकेकी छन् । उनको अपकमिङ फिल्ममा तेलुगु र तमिलको साथमा ब’लिउड फिल्म मु’म्बई सागा पनि सामेल छन् ।
त्य’सोत, गौतम कि’चलु एक इन्टरप्रेनर हुन् । उनी डिस्सर्न लिभिङ डिल’जाइन शपका फा’उन्डर तथा एक इ’नटेरियर डिजाइनर हुन् । -news24 बाट
ड्राइभर सुजन गुरुङको जीवन फेरियो, रचना रिमालसँग गीत गाएपछि भए भाईरल(भिडियो हेर्नुहोस्)
मंगल ग्रह लाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने,कुन दिन कति बजे हेर्नुहोस्
साबधान ! कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिले यी खा’नेकुराहरु खाँदै न’खानूहोस्
May 8, 2021 admin समाचार 4286
कोरोना सं’क्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरी’रलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रति’रोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट ब’चाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । कोरोना सं’क्रमित भएका
बिनोदलाई यसरी `आइ लभ यु´ भन्दै भेट्न बोलाईन् अनिताले (भिडियो सहित)
August 10, 2021 admin समाचार 3513
अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तवि|कता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मियताले भरिएको छ ।
बच्चा चोर्दा चोर्दै देख्ने दिदि मिडियामा : चोरको बोरा भित्र ड’रलाग्दो औषधि, यसरी समात्न सफल भए (भिडियो सहित)
May 8, 2021 admin समाचार 4829
भारतसँग सिमाना जोडीएको भद्रपु’रमा बच्चा चोर्दा चोर्दै एक अपरि:चित व्यक्ति पक्रा’उ गरेका छन् । प’क्राउ पर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी राकेश थापाले जान’कारी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिले
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227592)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220332)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216477)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215171)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213883)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195599)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182277)